Ukugenca: Akukhona nje ukwenza izinto kangcono kepha ukucabanga kangcono ngezinto | Kusuka kuLinux
Kusuka endatshaneni yethu edlule ehlobene nesihloko esithi «Hacker» ibizwa nge-Iminyakazo Ehlobene: Uma sisebenzisa i-Free Software, ingabe nathi sibaHacker?»Lapho sikhuluma khona ngokuthi Yini iHacker? futhi sixoxe kafushane ngemvelaphi yenhlangano yamanje, izinhloso zayo, ukubaluleka kwayo nokufana kwayo noma ubudlelwane bayo neFree Software Movement, Singawuthatha kalula lo mqondo omaphakathi olandelayo: "UHacker wenza izinto ezingcono kunezinye ezinekhono ngoba ucabanga izinto kangcono nangendlela ehluke kakhulu".
Abaduni abenzi nje kuphela izinto ezingcono noma ezingakholeki, okungukuthi, abagcini ngokuxazulula izinkinga futhi / noma bakhe izinto ezintsha noma ezinamandla abanye abazibona zinzima noma zingenakwenzeka, kepha ngokuzenza bacabanga ngokwehlukile kunesilinganisoLokho wukuthi, bacabanga ngokuya "ngenkululeko, ukuzimela, ezokuphepha, ubumfihlo, ukusebenzisana, ukukhiqizwa kwabantu." Uma ufuna ukuba uHacker, kufanele uziphathe njengokusho kwalefilosofi yokuphila, uphathe leso simo sengqondo kuwe, usenze ingxenye ebalulekile yobuntu bakho.
2.1 Hack izingqondo zethu
2.2 Ukugenca izindlela nolwazi esiludlayo
Kepha uma ucabanga ngokuhlakulela isimo sengqondo se- "Hacker" ikakhulukazi uma "Uthanda Isoftware Emahhala" njengoMthuthukisi noma UmsebenzisiNjengendlela yokuthola ukwamukelwa emhlabeni osebenza kuwo, wenza iphutha.
Ukwenza nokucabanga njengoHacker, ube uhlobo lomuntu okholelwa ukuthi okuningi noma konke kungathuthukiswa futhi kungathuthukiswa, nokuthi lenza okusemandleni alo ukwenza lezo zinto zenzelwe ukuzuzisa iningi ikakhulu, kuyinto okufanele isisebenzele ekuqaleni ukuthi isifunde futhi isigqugquzele, futhi isivumele ukuthi sisize abanye.
Ngakho-ke, indlela ephumelela kakhulu yokuba uthisha ukulingisa isimo sengqondo sothisha, hhayi ngokwengqondo kuphela, kodwa nangokomzwelo. Ngakho-ke ingqondo evulekile ekufundweni / ekubhalweni kwezihloko ezingapheli ezivela emibonweni ehlukene, eya emibonweni eyehlukile noma ephikisayo, kwiziphakamiso ezingenzeki noma ezingavumelani nemibono kubalulekile ukuba nomoya weHacker.
Hack izingqondo zethu
Kufanele ngikuxwayise ngokuthile. Nginomkhuba omubi wokucabanga ngemibuzo ngaphambi kokuphendula. UDavid Perkins, uprofesa omkhulu wezemfundo eHarvard kanye nochwepheshe ekufundeni, ukuqonda nasekuqambeni izinto.
Nsuku zonke, abantu bavame ukuba nemicabango eminingi emihle futhi abaningi ababi mihle kangako. Lokhu kusishiya sinesikhala esibanzi empilweni sokuhamba ngezindlela ezingafanele ngokungacabangi kangcono ngolwazi esiludlayo ngezindawo ezahlukahlukene zempilo: izinqumo zomuntu, isikhundla sezepolitiki, ubudlelwano babantu, imiqondo yefilosofi nezikhundla zenkolo.
Iqiniso ukuthi umhlaba uyindawo eyinkimbinkimbi lapho abantu bevame ukubonisana ngezihloko ezahlukahlukene, ngendlela enganele ngendlela ulwazi olwakhiwe ngayo, olwadluliselwa futhi lwakhiwa ngayo ezandleni zethu. Abantu bavame ukucabanga ngolwazi lwezihloko ezisetshenzisiwe ngendlela yokuthi zihlala ziboshelwe futhi zithambekele ekubukeni okuhleliwe kulwazi olufanayo, ngaleyo ndlela kuqiniswe umqondo wokuthi "ukuzikhohlisa kube mnandi."
Leyo abantu abavame ukujabula ngomqondo othile noma isihloko bathambekele ekutholeni noma kalula ukuthola ulwazi oluqinisa lowo mbono noma isihloko, okuthi uma kuwumqondo ongalungile noma umuntu osetshenzisiwe, iqinise inkolelo yamanga yayo phakathi komuzwa wenjabulo ongasilo iqiniso.
Ngenxa yalesi simo, Isinyathelo esihle kufanele kube ukuthi "ukuHack izingqondo zethu", ngamanye amagama kufanele "siziqeqeshe" ukubhekana nobuso obuhlukile bomqondo, isihloko noma isimo. Zama ukuzibeka ngombono wokunye noma uhlangothi oluhlukile lomqondo, isihloko, isimo noma iqembu. Zama ukuzethula kulokho okuhlaziyiweyo, ulingise okwenzekile noma kungenzeka. Ukuphakamisa ukuba nesimo esibucayi kakhulu kunesimo sengqondo mayelana nezinto ezisizungezile.
Phakathi kokukhethwa kukho okubili, khetha okwesithathu. UDavid Perkins
Buza ukwethembeka kwemithombo yolwazi esiyisebenzisayo, sebenzisa kaningi ukucabanga "Out of the box" (Out of the box), shiya imibono engenakunyakaziswa, engenaphutha nengunaphakade, okuvamise ukuba kohlobo lwezomnotho - lwezepolitiki - lwenkolo ”, amasu phakathi kokunye asisiza ukuvula izingqondo zethu emandleni nasemathubeni amasha nakahlolisisiwe.
Ukufunda ukucabanga kangcono kusisiza ukuthi siphumelele kakhulu ezinhlosweni zethu. Ubuqili ukwazi ukuthi unganquma kanjani kangcono ukuthi ungatshala kuphi kakhulu umcabango wethu nomzamo wethu, ukuthola izixazululo kanye nezinzuzo ezihlangene lapho kufakwa khona omunye, hhayi lapho kunguyena kuphela noma ohlomulayo oyinhloko. Yilapho lapho sidinga khona ukuhlakanipha uma kuziwa ekucabangeni.
Ukugenca izindlela nolwazi esiludlayo
Ezweni elinenani elikhulu kangaka ledatha, izinkampani ezinkulu zemidiya nezobuchwepheshe zisheshe zaqonda ukuthi kunento eyodwa kuphela ezuzisayo: ukunakwa kwethu. UTristan Harris, owayeyisisebenzi sakwaGoogle.
Izinkampani Zobuchwepheshe (I-Intanethi, Amakhompyutha, i-TV, ama-Mobiles, ama-Social Networks nolwazi / nokuxhumana) basekela impumelelo yezomnotho yamamodeli abo ebhizinisi ngokuduna ukunakwa kwabasebenzisi babo futhi balolonge indlela abaziphethe ngayo nemibono yabo. Umgomo wakho: Gcina abantu isikhathi eside ngangokunokwenzeka besebenzisa futhi bedla imikhiqizo yakho, okuqukethwe nolwazi. Kungani? Imali Namandla.
Ukugxila kwethu yisango labanye (Izinkampani Zobuchwepheshe kanye Nezazi Zezombusazwe, phakathi kwabanye) ezweni lethu langaphakathi, engqondweni yethu, emizweni, emizweni ngisho nasezinqumweni zethu. Bonke abancintisanayo ukubanjwa umlutha. Ngaso sonke isikhathi ngezindlela ezisebenza kahle, okusenza sibe imilutha ngokwengeziwe emithonjeni yolwazi nasekwanelisekeni ngokushesha, kusihlukanisa nabanye abantu nemvelo yethu yemvelo.
Ukungakubekezeleli ukukhungatheka, umlutha wemizwa yokwamukelwa nokwamukelwa, okusiholela ekutheni sakhe imicabango engemihle, ngokuya ngamaqiniso abonakalayo avezwe ezindaweni ezingokomphakathi.
Kungakho ukuba yiHacker kusho nokuthi "ukucabanga kangcono." Ukucabanga okungcono okubandakanya ukugwema ukukhohliswa, ukuncengwa, kanye / noma ukuhlanganiswa ngokugoba intando yethu, ngokufakwa ngaphakathi kwethu kokuziphatha, imizwa noma izimpendulo ezifunwa abanye, ngaphandle kokubamba iqhaza kwethu, kokusebenzisa ukwahlulela kwethu okubucayi.
Ukucabanga kangcono, ukuthuthukisa ukucabanga kwakho okubucayi, imvamisa lokho kuyikhambi lokukhohlisa noma ukuzikhohlisa. Ukuzazi lapho sigxila khona kuyinto ebalulekile yomqondo weHacker. Ukunakwa kuyisango lokungena kunoma iyiphi inqubo yokuncenga ngenkathi ukucabanga okunzulu kuyithuluzi elisivumela ukuthi sikhethe imininingwane esiyithola nganoma iyiphi indlela. Futhi ukwazi ukwakheka kwengqondo esichayeka kukho kungasivumela ukuthi senze izinqumo ezibhekele kahle.
Kungabonakala njengokumnandi kakhulu ukuba yiHacker, Ukwenza izinto iziHlakeli ezikwenzayo, Ukucabanga njengoHacker, kepha iqiniso ukuthi Ukuba, Ukwenza Nokucabanga NjengeHacker luhlobo lobumnandi oludinga umzamo omkhulu nesisusa. Umgengezi kufanele azizwe noma azizwe enohlobo lwangaphakathi, lokuzalwa, injabulo yemvelo lapho exazulula izinkinga, ekhulisa amakhono akhe, esebenzisa ubuhlakani bakhe, ebuza iqiniso lakhe futhi engavumelani njalo nezinto ezibalulekile emhlabeni wamanje, ohlelweni, abanye abavame ukuba engabonakali noma engabalulekile, noma okubi kakhulu, enhle phakade, elula, noma elungile kwezepolitiki.
Ziningi ezinye izinto ezijwayele ukuveza ubuntu beHacker, njengokuthile kwabo "Okuphikisana neSistimu".Kepha ukusebenza kanzima nokuzinikela ezintweni abazithandayo kuvame ukuphenduka uhlobo lomdlalo oshubile, hhayi inqubo, kubo. Leso simo sengqondo sibalulekile ukuze ube yiHacker.
Siyethemba ngalolu shicilelo "Vusa leHacker ukuthi wonke umuntu unayo ngaphakathi" enethemba lokwenzela abanye izinto ezinhle ikakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Ukugenca: Akukhona nje ukwenza izinto kangcono kepha ukucabanga kangcono ngezinto
Isiqalo seviki esihle. $ -> Happy_Hacking
Ngijabule kakhulu ukuthi uyithandile, futhi ngiyabonga ngamazwana akho amahle.